Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0713 lak
Any amin'ny ranomasina lalina
Alakamisy 16 May
Ny bokin’i Mika dia miantomboka amin’ny filazalazana fitsarana saingy miafara amin’ny tenim-panantenana. Misy olona miezaka manao fanazavana manohitra ny maha-zava-misy ny fitsaran’ Andriamanitra. Izay manao izany dia latsaka ao amin’ny fandrika izay nahavoa ny mpiara-belona tamin’i Mika, izay nino fa Andriamanitra dia tsy hampihatra na oviana na oviana ny fitsarany amin’ny firenena nofidiny.
Ny fahamarinan’Andriamanitra no lafiny iray amin’ny fitiavany sy ny fiahiany. Ny vaovao mahafaly ambaran’i Mika dia hoe: na oviana na oviana dia tsy ny famaizana no zavatra farany ataon’Andriamantira. Mandrakariva ny asa ataon’ Andriamanitra ao amin’ny Soratra masina dia avy amin’ny fitsarana mankamin’ny famelan-keloka, avy amin’ny famaizana mankamin’ny fahasoavana, avy amin’ny fahoriana mankamin’ny fanantenana.
Vakio ny Mika 7:18–20. Ahoana no anehoan’ireo andininy ireo ny filazantsara? Inona no fanantenana voambara eto ho antsika tsirairay? Nahoana no mila fatratra izany isika?
Ny andininy mamarana ny bokin’i Mika dia maneho fiderana feno fanantenana. Ny hevitry ny anaran’i Mika dia ilay fanontaniana indrindra hoe “Iza no tahaka an’ Andriamanitra...?” Mampahatsiahy antsika ny maha-tokana an’Andriamanitra izany ary manamafy ny fahamarinana fa tsy misy tahaka Azy. Iza no afaka ho tahaka Azy? Izy rahateo no Mpamorona. Ny zavatra hafa rehetra dia noforonina. Ary indrindra, ilay Mpahary antsika dia Andriamanitra feno fahasoavana sy mpamindra fo, Andriamanitra nanao ny fomba rehetra tsy takatry ny saina mba hamonjena antsika amin’ny fandringanana izay mendrika antsika. Nataony ho an’ny firenena Jiosy izany ary tanterahiny ho antsika koa.
Angamba hodidinin’ny toe-javatra sarotra sy ny fanandramana maharary isika ankehitriny ka manontany tena hoe nahoana no avelan’ Andriamanitra hitranga izany rehetra izany. Indraindray dia sarotra tokoa ny mahatakatra ny toe-javatra miseho. Amin’ny fotoana toy ireny, ny fanantenantsika dia ao amin’ Andriamanitra irery ihany, Izay nampanantena fa hanary ny fahotantsika rehetra any amin’ny ranomasina lalina. Misy fanantenana ny amin’ny hoavy rehefa tsaroantsika izay nataon’ Andriamanitra tamin’ny lasa.
Diniho tsara ny tenanao. Nahoana no hany iorenan’ny fanantenantsika ilay fanomezan-toky nataon’Andriamanitra hoe hariany “any amin’ny ranomasina lalina” ny fahotantsika?